Ny taom-baovao Shinoa dia tahaka ny antoko lehibe indrindra eto an-tany. Izany ankalazaina amin'ny mihoatra ny arivo tapitrisa Sinoa manerana izao tontolo izao amin'ny fety be hafanam-po. Ary izao slot lalao avy IGT dia tena mifototra amin'ny izay. Raha ny marina ny hevitry ny Gong Xi Fa Cai mihitsy no Sambatra taona vaovao. Toy ny fety izany dia mifototra amin'ny ny lalao dia Grand, Mahafinaritra sy voly. koa, ity lalao ity no kely fotsiny voly, ianao hahazo fahafahana handresy ny mangatsiatsiaka 8 tapitrisa dolara. Izany no iray amin'ireo tsara indrindra slots UK-tserasera.
IGT na iraisam-pirenena Teknolojia Gaming dia slot lalao developer izay manana ny foibeny any Las Vegas, Nevada. Izy ireo teo amin'ny raharaham-barotra ity ho tena ela sy manana malaza maro slot lalao ao amin'ny lisitra toy ny 100K Piramida sy Da Vinci Diamonds. Ny lalao an-tserasera mampiseho amin'ny tsara indrindra slots UK
Izany dia an-tserasera lahatsary slot lalao amin'ny 5 reels ary 50 paylines. Ny lalao dia manana foto-kevitra tatsinanana, ny fototry ny izay efa babo mahagaga na amin'ny famolavolana sy ny sary ny lalao. Ny marika rehetra foto-kevitra mifandray. Manana ny Dragon Piñata mendrika ny 100x ny tsato-kazo, Koi besisika mendrika 125x, Phoenix mendrika 200x ary farany ny mavo sy maitso dragona izany mendrika goavana 500x. Ary mazava ho azy dia misy ny bibidia famantarana izay miasa ho toy ny mpisolo toerana ho an'ny rehetra ny marika hafa afa-tsy ny aelezo mariky. Koa ny bibidia mendrika 600x ny tsatòka raha tanety 5 ny azy teny an-reels. Izany no mahatonga azy iray amin'ireo tsara indrindra slots UK-tserasera
Izany dia namoly tombony maimaim-poana manodidina izay niteraka ny hipetraka ny aelezo fanehoana an'ohatra eo amin'ny reels 1,3 ary 5. Ny isan'ny malalaka spins fiovana azonao isaky ny hitarika ny endri-javatra araka ny nanapa-kevitra tsapaka.
Fa ny zavatra tsara indrindra momba ny Gong Xi Fa Cai slot dia ny jackpot manodidina. Io tolotra io ny tsapaka niteraka iray ary manana 4 ambaratonga. Nahazo ny faha-4 sehatra mahazo anao ny jackpot ny 8 tapitrisa dolara. Tsy mahagaga àry izany no iray amin'ireo tsara indrindra slots UK-tserasera
Gong Xi Fa Cai dia slot amin'ny avo volatility ampy. Ny lalao no tena lasibatra manoloana ireo mpilalao izay tia ny fientanam-po ny iray atahorana lalao. Saingy tsy midika ny hafa dia tsy afaka mankafy izany lalao. Raha ny mpilalao miloka amim-pahendrena, afaka manana be dia be ny fahafinaretana manao io lalao io tsy manahy momba mpanjifany. Andramo izao – Izany no iray amin'ireo tsara indrindra slots UK-tserasera